/ Products / Anabolika Steroids / Trenbolone poids Series / Dienolone vovoka (6218-29-7)
SKU: 6218-29-7. Sokajy: Trenbolone poids Series, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Dienolone (6218-29-7), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Dienolone powder (Dienolone (Trenazone Tren X)) dia steroid anabolic-androgenic steroid (AAS) of the 19-nortestosterone group that was never marketed. Ny dienolone dia manana anabolika amin'ny androgenic ratio 100 / 10 raha ampitahaina amin'ny methyl-testosterone, mampiseho izany ho anabolika fa tsy tena androgenic ...
Dienolone vovoka vidéo
Dienolone powder ireo karazana fototra
Color: Voangona volo fotsy
Famaritana an-tsoratra: Deneolone volo, antsoina hoe "tren".
Anarana hafa: na ny dieneolone, RU-3118, Trenazone, Dienazone, Trenazone Tren X
Dienolone fampiasana vovoka
Ny vovo-dronon'ny dienolone (Dienolone vovoka (Trenazone Tren X)) dia steroid anabolic-androgenic steroid (AAS) amin'ny vondrona 19-nortestosterone izay tsy nividy na oviana na oviana. Hita fa misy fiantraikany kely kokoa amin'ny mpitsabo sy ny progesterone (PR) raha oharina amin'ny nandrolone amin'ny rat-boaka sy ny tavy bioassays, fa ny tranbolona kosa dia hita fa mitovy ny fiombonana amin'ny AR toy ny vovobony Dienolone, hampitombo ny fiaraha-mientana ho an'ny PR. Ny dienedione (ny 17-keto analogy an'ny vovoantitra Dienolone, fantatra ihany koa amin'ny hoe 19-nor-4,9-androstadienedione) dia heverina ho prohormone ny poezia Dienolone, ny methylDienolone poids sy ny ethylDienolone pohe menaka dia mavitrika active 17α-alkylated AAS derivatives of Dienolone vovoka. Ny mifanohitra amin'izany kosa, diogy 17α-cyanomethyl ny vovony manerantany Dienolone, dia progestogen sy antiandrogen.
Ny vokatra mety dia miovaova arakaraky ny dosage, na dia betsaka amin'ny dosages aza ny Trenazone dia hanampy kely amin'ny fihenan'ny vatana, hampitombo ny fahasamihafana amin'ny hozatra, hampitombo ny haben'ny muscular, hampitombo ny fahasitranana, ary hampiroborobo ny fiasan-danja kokoa.
Ny tena sarotra ny manombana ny vokatra satria matetika i Trenazone no mijanona amin'ny zavatra hafa, saingy mamokatra vokatra hita izany raha toa ka mihinam-panafana ny sakafo, ny fampiofanana ary ny dosing.StackingTrenazone dia mpihira malaza, satria tsy methylated izay mamela azy Ny mpampiasa dia ny hampifandray azy amin'ny anabolika malaza amin'ny fomba malaza toy ny Epistane. Matetika ny mpampiasa dia te-haka an'io varo-boba io amin'ny fanafody avo lenta kokoa mba hanomezana vokatra mibaribary amin'ny anabolic / androgenic. Azo ampiasaina mandritra ny ampahany na ny tapa-kazo ny trenazone. Ity ambany ity ny lisitra fohy amin'ny anabolika marobe antsoina hoe Trenazone:
Methylated Compounds (Epistane, Methyl-Stenbolone, D-Plex, sns)
Tsy misy methylated (Stanodrole, 1-DHEA, 11-oxo, sns)
Inona ny dosage amin'ny vovony Dienolone
Ny DosingThis fitambarana dia matetika mifototra amin'ny vokatra methylated noho izany dia manampy tosindry ny havokavoka. Amin'ny ankapobeny, ny trenazone 1-1.5ml andro iray (75-112.5mg) no dosie faran'izay malaza, nefa ny mpiserasera efa manana pro-hormone taloha na traikefa steroid efa ela dia afaka manandrana amin'ny dosages amin'ny 2ml (150mg) isan'andro. satria sarotra amin'ny faran'ny vatanao dia mety haharitra hatramin'ny 8 herinandro lava amin'ny herinandro 6 no mahazatra indrindra. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia hanomboka hanamarika ny fiantraikan'ny herinandro fahatelo amin'ny endriky ny harefo / hery matanjaka. Ny mpisolo vava dia tokony hijanona ao anaty dingana ankapobeny ary tsy mihoatra ny herinandro 6 mandritra ny halavam-potoana, na dia afaka mampiasa azy ireo mandritra ny herinandro 8 aza ny mpampiasa za-draharaha. Ny fiomanana amin'ny transdermal dia manana halaviran-dava lava be, noho izany dia mety hampiasa tsara isan'andro ny fampiasana Trenazone. Ny toerana tena tsara hampiharana an'i Trenazone dia ny tendany, indrindra fa ny tendany ambany amin'ny clavicle, ambony ambony, fefy ivelany, tratra ary kibo.
Ny fomba fiasan'ny Dienolone
Dienolone vovoka (4,9-estraDienolone vovon-dite) dia ny hoe ny "pre precursors" malaza dia mivadika. Ny dity methylated ity steroid (methylDienolone powders) io dia teo amin'ny bateria ary nivarotra azy ho toy ny orinasa tranbolona talohan'ny voarara miaraka amin'ny steroid maro sy prohormones amin'ny fiandohan'ny 2005. Ny diteolon'ny dieneolone sy ny trenbolon dia mitovy amin'ny rafitra, saingy tsy tokony hihevitra azy ireo ho mitovy.
Ny poezia dieneolone dia manana anabolika amin'ny androgenic ratio of 100 / 10 raha oharina amin'ny methyl-testosterone, mampiseho izany ho anabolika fa tsy tena androgenic. Ny poety Dienolone dia tsy mivadika ho estrogen, fa misy ihany koa ny asany fihodinana izay afaka mampitombo ny fiantraikan'ny estrogen. Noho izany antony izany, ny volo madinidra Dienolone dia matetika tsy mifangaro amin'ny steroïde hafa na prohormones izay manana fihenan'ny fivoarana estrogen. Tahaka ny trenbolone, ny volo Dienolone dia mety manana fiantraikany mahasitrana, mampitombo ny fihenan-tsakafon'ny vatana ary manampy ny mpampiasa handao ny vatana. Raha ny marina, ny vovo-dronono Dienolone dia tokony ho azo ampitahaina amin'ny trôbolona na ho nandrolone raha tsy ny fivoarana estrogen.
Ny dieneolone vovoka dia tsy tokony ho mafy loatra amin'ny endriky ny androgenic na estrogenic, fa misy amin'ny endri-pandehan'ny endrohy steroidika dia mety ary ny vokadhetika ny fagnestial ny Dienolone raw vovoka manao gynecomastia mety. Ny dieneolone vovoka dia tsy methylated ka rehefa nalaina am-bava dia tsy tokony hametraka vesatra be loatra amin'ny aty.
Indrisy fa ny tsy fahampian'ny vondrona M-17 fanampiny dia mahatonga ny Dienolone vovony mangatsiatsiaka ho an'ny fivontosana tena mahantra, ka azo antoka fa tsy fomba mahomby hampidirana ity steroid ity. Fa kosa, te-hampiditra vorona am-bava ny vovony manerantany Dienolone. Ny dodeolone dia mety ho azo ampiasaina ho toy ny transdermal (mihosotra amin'ny hoditra), ary mety hisy vokany azo avy amin'ny steroid koa.
Ny "Diet Dr. Tren" nohavaozina noho ny hatsikana sy ny fifandraisana amin'ny aterineto, ny poezia Dienolone dia avy amin'ny kilao Nandrolone amin'ny steroids anabolic-androgenic (AAS). Araka ny hevitr'ilay teny, ny poety Dienolone (A / A 100: 10) dia mampiseho toetra mampahatsiahy ny Trenbolone (A / A 500: 500); na dia tsara kokoa aza ny lohahevitry ny forum. Na dia eo aza ny fahasamihafana misy eo amin'ny herin'ny taratasy, ny fanatsarana ny fiasan'ny vatana sy ny tanjaka dia tandindon'ny fanolorana poitran'ireto Dienolone mialoha ny hoditra. Amin'ny maha-solontenam-panjakana azy, tsy ampy ny vovo-dronono Dienolone ny mety ho toetran'ny hypertrophy toy ny Testosterone, Oxymetholone, ary Methandrostenolone. Na izany aza, ny fampiasana azy miaraka amin'ny androgen dia manamora ny fivelaran'ny masirasira. Amin'io lafiny io, ny vovony manerantany Dienolone dia manana andraikitra manan-danja amin'ny fanohanana mifandraika amin'ny habakabaka, saingy tsy tokony heverina ho toy ny steroid hafa amin'ny alalan'ny fepetra. Ny tena vidin'ny Dienolone vovoka dia ny fampielezana azy dia mihamaro ihany fa tsy mifanohitra amin'ny fanampiana.
Na dia teo aza ny fitoviana hita teo amin'ny Dienolone volo sy Trenbolone, ny valin'ny fanamarihana tsy matihanina dia manondro ny fahitana kokoa ny teo aloha raha ampitahaina - tsy hita ny vokatra hafa: ny lozam-pandrenesana, ny hatezerana, ny herisetra, ny hatsatra amin'ny alina, ny "cousine tren", sns. Azo atao ny manelanelana ny singa 11-ene amin'ny tranolay Trenbolone, izay tsy hita ao amin'ny fanorenana Dienolone. Tsara homarihina koa fa ny roa dia mampiseho fahasamihafana matanjaka amin'ny fari-pitenenana anabolika sy androgenic miaraka amin'ny vovon-tsakafo Dienolone izay manintona ny endrika amabolika. Io fahasamihafana io dia azo inoana fa mpandray anjara mivantana amin'ny voka-bary voalaza teo aloha. Tsy malemy izy io, fa toy ny vahaolana tsy dia masiaka amin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, ny poezia Dienolone dia manome tombony azo tsapain-tanana sy tombontsoa ara-nofo amin'ny tsy fahampiana.
Ny vovony menaka dieneolone dia nahatonga ny fifangaroana hita eo amin'ny tsena fanampiny amin'ny endriky ny mavitrika mivaingana, methylated, ary fisakanana. Ny fahombiazany ho toy ny "muscle builder" maimaim-poana dia azo lazaina ho ampahany amin'ny dieraine dieneolone dodecine izay misalasala ho ny analogues Trenbolone. Io fametavetana ara-barotra io miaraka amin'ny fihenan'ny tsimokaretin'ny steroid dia nahatonga ny fahombiazan'ny vovoantitra Dienolone sy ny hôpitiora pro-hormone. Hatramin'izao dia nesorina lavitra ny tsenam-barotra ho an'ireo solika ireo, fa ny vovobony Dienolone kosa dia nahita fampiasana lehibe kokoa; Ny "Sup-Tren" fanafody dia notononina voalohany noho ny fampiharana ny fampiharana am-bava. Mahagaga fa tsy nisy lisitra mazava tao amin'ny "voankazo voarara" ny tranom-paty Dienolone tsy nisy fanovana. Io dia nanolotra tombontsoa manokana hiarovana ny fisian'ireo izay manintona ny fampivoarana.
Ny tsy fisian'ny milefitra na ny fanovana, ny rafitra boribory Dienolone dia tsy afaka mandalo fitantanana ny orana nefa tsy misy fiovana lehibe. Efa mazoto hatramin'izao, ny tsenam-bola fanampiny dia nahatonga ny vokatra entina hampiasana transdermal carriers ho fitaovana fampihenana ny fisarahana. Na dia eo aza ny fahombiazan'ireo rafi-pamindram-pitaterana ireo, ny fampiharana ny DASCA dia nandrisika orinasa maro handao ny sokajy pro-hormone amin'ny ankapobeny. Tsy natoky ny zava-manahirana amin'ny famenoana ny mpanadio, ny orinasan'ny fikarohana ara-pambolena efa mivoatra dia nanomboka nanohana ireo solika mifototra amin'ny solika ho an'ny vokatra isan-karazany. Na dia ampiasaina amin'ny fikarohana tsotra fotsiny aza izany, dia lasa andriamanitra ireo vahaolana matanjaka ireo ho an'ireo mitady fitaovana azo antoka amin'ny "fanadihadiana".
Dienolone Rohirohotra Marketing
Manana fiantraikany mahatsiravina ve ny roapolo-mainty Dienolone?
Ny fiantraikan'ny Side miaraka amin'ny trenazone dia tsy mahazatra raha ampiasaina irery, fa mety hampiakatra tosidra sy hampihenana ny lipididana mitovy amin'ny an'ny anabolic. Noho ny fisian'ny fifandraisana amin'ny gyno mpandray ny progesterone dia mety ho azo atao izany, na izany aza ny fametrahana izany miaraka amin'ny vatana mihoatra ny androgenic toy ny epistana na stanodrol dia hanampy hanamaivana izany. Raha misy endri-tsakitera steroid na pro-hormone dia mety hitranga ary amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia 'mialà amin'ny alàlan'ny fanarahana toro-làlana fanohanana ara-dalana. Ireto manaraka ireto dia lisitr'ireo zava-manan'aina hafa miaraka amin'ny Trenazone:
Fahavitan'ny Libido / Sexual Function
Angamba / toetran'ny fahatsapana
Nampihena tsikelikely ny sigara
Back Pumps (fanaintainana miverimberina aorian'ny / mandritra ny fiatoana)
Ahoana no hividianana volo Dienolone avy any AASraw
Dienolone ronono vovoka Recipes